Giriiga oo dalxiisayaasha u furaya wadankiisa mudo kadib Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka CaalamkaGiriiga oo dalxiisayaasha u furaya wadankiisa mudo kadib
Giriiga oo dalxiisayaasha u furaya wadankiisa mudo kadib
April 21, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Giriiggu wuxuu bilaabay inuu u furo dalxiisayaasha wadankiisa wuxuu rajo ka qabaa inuu kasoo kabsado samaynta 2020 ee uu halakeeyay cudurka coronavirus.
Jasiiradda Rhodes, halkaas oo booqdayaasha ugu badan ay ka yimaadaan dibedda, ee gaaraan ayaa bilowday in ay diyaariyaan Hoteelada iyo goobaha kale ee la booqdo.
“Waxaan u diyaarinaynaa hoteelka si aan u bilowno isla marka ay dowladu na siiso nalka cagaaran,” George Tselios, oo ah agaasimaha guud ee Sun Beach Hotel, oo macaamiishiisa ay ka kala yimaadeen Scandinavia, Germany, Austria iyo Britain.
Giriiggu wuxuu si rasmi ah u furi doonaa 14ka Maajo laakiin laga bilaabo Isniinta, dalxiisayaasha ka socda Midowga Yurub, Mareykanka, Ingiriiska, Serbia, Israel iyo Isutagga Imaaraatka Carabta lama karantiilati haddii ay soo qaateen talaalka COVID-19.
Dalxiiska, oo soo saaraya shan meelood meel GDP-ga iyo shantii shaqaba mid, ayaa muhiim u ah dhaqaalaha wadanka.